Tammy Abraham oo Mushahar kordhin ka dalbaday Kooxdiisa Chelsea… (Imise kun ayuu doonayaa in jeebka loo geliyo?) – Gool FM
Haaruun July 7, 2020
(London) 07 Luulyo 2020. Weeraryahanka Kooxda Chelsea ee Tammy Abraham ayaa la soo warinayaa inuu kooxdiisa ku wargeliyey inuu doonayo heshiis cusub oo uu ku rabo inuu todobaadkii ku qaato 130 kun oo gini.
22-sano jirkaan ayaa kal ciyaareedkan xilli ciyaareed qurux badan ku qaadanaya garoonka Stamford Bridge, isagoo dhaliyey 15 gool 39 kulan oo uu saftay, waxaana uu ahaa dooqa koowaad ee weerarka dhexe uu u adeegsado Tababare Frank Lampard.
Kooxda ka dhisan Galbeedka Magaalada London ayaa wadahadallo heshiis kordhin ah kula jirta Abraham, laakiin ciyaaryahan ayaa sugayay saxiixyada xagaagan ay kooxdu sameyso ka hor inta uusan go’aansan mustaqbalkiisa.
Chelsea ayaa horraan la soo wareegtay Weeraryahan Timo Werner iyo Garablaha Hakim Ziyech si uu loollan adag u wajaho xiddiga reer England xilli ciyaareedka soo aaddan, iyadoo Werner la fahamsan yahay inuu qalinka ku duugay heshiis uu todobaadkii mushahar ahaan ugu qaadanayo 170 kun oo gini.
Jariiradda The Times ayaa warinaysa in Abraham uu doonayo in laga sarreysiiyo mushahar ka badan xiddiga ay akadeemiga kooxda ka soo wada baxeen ee Callum Hudson-Odoi, maadaama xiddigan garabka ka ciyaara uu todobaadkii jeebka ku shubto 120 kun oo gini.
Abraham, kaasoo hadda todobaadkii mushahar ahaan u qaata 50 kun oo gini ayaa la soo warinayaa inuu doonayo in mushaharkiisa lagu kordhiyo 80 kun oo gini, isla markaana uu u qaato todobaadkii 130 kun oo gini si uu mustaqbalkiisa ugu hibeeyo kooxda.
Xiddiga xulka qaranka England ee Abraham ayaa heshiiskiisa haatan uu kula jiro Blues waxa uu ku eg yahay sanadka 2022-ka, inkastoo ay wadahadallo heshiis kordhin ah u socdaan labada dhinac.